အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ အစကတည်းက မယူကြဖို့ မိန်းမထုကြီးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ခြူးစစ်ဟန် - Cele Gabar
အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ အစကတည်းက မယူကြဖို့ မိန်းမထုကြီးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ခြူးစစ်ဟန်
By RainowPosted on July 1, 2020 July 1, 2020
အနုပညာကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ ဝါသနာပါရာ အနုပညာခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းရင်း ဘဝကိုအကောင်းမွန်ဆုံးတည်ဆောက်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ Miss Golden Land Myanmar 2015 ရဲ့ Miss Face Of Beauty Title ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကို ရရှိထားပေမယ့်လည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသေးဘဲ မိဘကိုပဲ လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ သမီးလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခြူးစစ်တစ်ယောက် နေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်လေးကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
” ယောကျာ်းတွေယူပြီး ကွာရှင်းရတာနဲ့ ပြတ်စဲရတာနဲ့…. ဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး စိတ်တွေတောင်ပြတ်လာပြီ…. နောက်လည်း ကွာရှင်းကြမှာခြင်းအတူတူ ယူမနေပါနဲ့တော့…. ယောကျာ်းတွေကို နော် အမျိုးသမီးထုကြီးရေ…. အာ့ရှင်တို့ယောကျာ်းတွေမကောင်းလို့” လို့ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာတောင် အိမ်ထောင်ရေးပြတ်စဲမှုသတင်းတွေကို ဆက်တိုက်မြင်တွေ့လာရတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ နောက်လည်း ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ ယူမနေပါနဲ့တော့ အမျိုးသမီးထုကြီးရေ ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်ကာမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရော ခြူးစစ်ဟန်ရဲ့စကားကို သဘောတူရဲ့လား။
Source – Chuu Sitt Han
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Chuu Sitt Han, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ခြူးစစ်ဟန်, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post ဖခင်ဖြစ်သူကိုမွေးနေ့ Surprise လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမှတ်တရကို ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို
Next post နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရဲ့ Mask ချုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ ရရှိတဲ့ဆုကို ဒီနေ့မှာလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး